Nguruve sirloin nedoro muhari inokurumidza, yakapusa dhishi | Kicheni Mapepa
Nguruve sirloin nedoro
Montse Morote | | Spanish Cuisine, Mapinda Anopisa
Iyo nzira yakakwana yekushamisa mhuri, a yenguruve nyoro nedoro. Iresipi yakapusa iyo yakagadzirirwa munguva pfupi.
Iyo yenguruve nyoro nyama yakapfuma uye ine muto, ine mafuta mashoma, zvakanaka kwazvo kugadzirira mumuto, iri nyoro uye inonaka. Tiri kuzoigadzirira mu inokurumidza kubika imwe, inokurumidza uye yakapusa nzira yekubika.
2 yenguruve nyoro nyoro
1 chirongo chehowa
1 gaba redoro
Hafu yegirazi remvura
1 bouillon kuutio
1 bay shizha
Isu tinogadzirira masirosi, kuachenesa kubva kune chero mafuta akasara uye nekuwedzera munyu uye mhiripiri.
Isu tinoisa hari pamoto nejeti yakanaka yemafuta uye tinoisa mafirita mukati mayo uye kuisvibisa pamusoro pekupisa kwakanyanya pamativi ese kuti avhare zvakanaka. Isu tinobvisa
Mumafuta mamwe chete iwayo tinoisa hanyanisi yakatemwa uye toisiya maminetsi 3-4 kuti titore kara shoma, padivi peeiii tinoisa chipunu cheupfu tichimutsa zvese pamwechete.
Isu tinoisa masirosi, isu tinowedzera doro uye kana rikatanga kuvira tinoisiya kwemaminetsi matatu kuitira kuti doro ripere, tinoisa hafu yegirazi remvura kana girazi kana tichida mamwe muto, sisitimu cube uye bay leaf , tinovhara hari uye panotanga kubuda chiutsi tinoisiya kwemaminetsi gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu, kudzima hari yacho tobva tasiya kusvika bota rese rabuda.
Isu tinovhura gaba rehowa uye toisa paseni nemafuta mashoma.
Isu tinobvisa nyama uye kana ichidziya tinogona kuicheka, tinopfuura sosi kuburikidza ne blender, tinoidzosera muhari pamwe chete nenyama yakachekwa uye howa, tinoipisa.
Kana iwo muto uchimhanya zvishoma, nyunganya hupfu hwezviyo mumvura inotonhorera uye tinozoiwedzera mumuto.
Isu tinoiisa mune sosi inoperekedzwa nehowa.
Uye wagadzirira kudya !!!
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Nguruve sirloin nedoro
Mhoroi, ini ndagadzira yako yekubheka uye ndikateedzera iyo poindi nepfungwa sezvaunotsanangura. Mushure mekunge sirloin yatonhora ndakaiisa mufiriji uye mushure memaawa matatu ndakaedza kuicheka. Mission haigone yakakwenenzverwa kunyangwe hazvo yakasaina banga zvakanaka, uye handicho chakaipisisa ndechekuti rakaomarara, jira reparaketi, risingadyiwe ndakarikanda kure. Ndabvunza mumwe munhu mumhuri yangu uye anondiudza kuti mune yekumanikidza yekubika maminitsi gumi kuitira kuti isamhanye, ndoda kana iwe woti iri pakati pemaminitsi gumi nemashanu kusvika makumi maviri. Ini handisi kuzoedza chero mamwe mabikirwo ako, unofanirwa kuzviita iwe usati wanyora. Wakandikanganisira ndiro iyi.
Mazuva mashoma apfuura ndakaisa recipe yako yakanaka pabvunzo.Chokwadi ndechekuti chakabudirira, chinhu chega chakachinja ndechekuti ndaingova nacho muhari kwemaminitsi gumi uye chakabuda chine muto uye chakagadzirira kudya. recipe.
Detox infusion yepinapple, apuro uye girini tii